တစ္တန္းေက်ာင္းသူေလးကို (၉)တန္းေက်ာင္းသားက ေက်ာင္းအိမ္သာထဲေခၚ မုဒိန္းက်င့္...! - Thadin
HomeNEWSတစ္တန္းေက်ာင္းသူေလးကို (၉)တန္းေက်ာင္းသားက ေက်ာင္းအိမ္သာထဲေခၚ မုဒိန္းက်င့္…!
June 12, 2019 Kay Kay NEWS Comments Off on တစ္တန္းေက်ာင္းသူေလးကို (၉)တန္းေက်ာင္းသားက ေက်ာင္းအိမ္သာထဲေခၚ မုဒိန္းက်င့္…!
ဟိန္းမင္းေဝဆိုသူမွေရာက္လာျပီး မိန္းကေလးငယ္အားပ ါးစပ္ပိတ္၍ အိမ္သာထဲေခၚေဆာင္သြားျပီး မိန္းကေလးငယ္၏ မိန္းမကိုယ္ေနာက္ေပါက္အားက်င့္္က်န္ခဲ႔သည္ကိုေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္ မိန္းကေလးငယ္၏ မိခင္မွေက်ာင္းသို႕သမီးျဖစ္သူ မ အား လာေရာက္ၾကိဳျပီးအိမ္ျပန္ေရာက္ခ်ိန္သမီးလုပ္သူမွထမင္းစားျခင္သည္ဆို၍ထမင္းစားျပီးေရခ်ိဳရန္အဝတ္အစားခြ်တ္၍အိမ္သာတက္ျခင္သည္ဆိုကာအိမ္သာသြားတက္ရာမ – မွအေမေရလာပါအံုးသမီး ေသြးေတြထြက္ေနသည္ေျပာရာမိခင္မွေသြးေတြျမင္၍လန္႕ျဖန္႕ျပီးေရေဆးခ်လိုက္သည္
သမီးျဖစ္သူအားေမးျမန္းရာကိုကိုမွသမီးဟာကိုလုပ္သည္ဟုေျပာသည္မိခင္မွၾကားသိျပီးေနာက္တေန႕ေက်ာင္းလိုက္ပို႕ရာေက်ာင္းနားမွဆိုင္ကယ္ဆိုင္တြင္ တရပ္ကြက္ထဲေန(အဖ)ဦးႏိုင္ဝင္း၏သား ဟိန္းမင္းေဝ ကို
ဟိန်းမင်းဝေဆိုသူမှရောက်လာပြီး မိန်းကလေးငယ်အားပ ါးစပ်ပိတ်၍ အိမ်သာထဲခေါ်ဆောင်သွားပြီး မိန်းကလေးငယ်၏ မိန်းမကိုယ်နောက်ပေါက်အားကျင့််ကျန်ခဲ့သည်ကိုကျောင်းဆင်းချိန် မိန်းကလေးငယ်၏ မိခင်မှကျောင်းသို့သမီးဖြစ်သူ မ အား လာရောက်ကြိုပြီးအိမ်ပြန်ရောက်ချိန်သမီးလုပ်သူမှထမင်းစားခြင်သည်ဆို၍ထမင်းစားပြီးရေချိုရန်အဝတ်အစားချွတ်၍အိမ်သာတက်ခြင်သည်ဆိုကာအိမ်သာသွားတက်ရာမ – မှအမေရေလာပါအုံးသမီး သွေးတွေထွက်နေသည်
ပြောရာမိခင်မှသွေးတွေမြင်၍လန့်ဖြန့်ပြီးရေဆေးချလိုက်သည်သမီးဖြစ်သူအားမေးမြန်းရာကိုကိုမှသမီးဟာကိုလုပ်သည်ဟုပြောသည်မိခင်မှကြားသိပြီးနောက်တနေ့ကျောင်းလိုက်ပို့ရာကျောင်းနားမှဆိုင်ကယ်ဆိုင်တွင် တရပ်ကွက်ထဲနေ(အဖ)ဦးနိုင်ဝင်း၏သား ဟိန်းမင်းဝေ ကို
မ – အားတိုက်ခဲ့ရသည် /ဆေးတိုက်ပြီးကျောင်းဆက်တက်နေစဉ်(8-6-2019)နေ့တွင် မ — မှာနာကျင်၍ကိုယ်ပူပြီး နေမကောင်းဖြစ်ရာမိခင်မှနီးစပ်ရာအကူအညီတောင်းခံရာ အ-ထ-ကမှကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးကိုယ်တိုင်အင်ပင်တိုက်နယ်ဆေးရုံသို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည်(9-6-2019) နေ့ညတွင်အင်ပင်နယ်မြေရဲစခန်းတွင် မ –၏မိခင်ဖြစ်သူမှသွားရောက်တိုင်တန်းအမှု့ဖွင့်ခဲ့သည်/ (11-6-2019) နေ့အထိအင်ပင်ဆေးရုံတွင်ဆေးကုသမှု့ခံယူနေသည့်မ –မှဆေးရုံစတက်စဉ်ထဲမှယနေ့အချိန်အထိကိုယ်ပူပြီးအဖျားမကျသေးပါ
This Month : 23702
This Year : 277172
Total views : 2982241